RASMI: Barcelona oo dib kaga soo ceshatay kooxda Nice xidigeeda Marlon Santos – Gool FM
RASMI: Manchester City oo heshiis cusub ee wakhti dheer ka saxiixa Aymeric Laporte
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Chelsea oo ku dhiiragaliyay in qandaraaska ay u kordhiyaan Eden Hazard
RASMI: UEFA oo ganaax dul dhigtay Alexandre Lacazette… (Imisa kulan ayuu ka maqnaan doonaa kooxda Arsenal?)
Zanetti oo si kulul u dhaleeceeyay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Icardi
AEK Athens oo laba sanadood laga joojiyay ka qayb galka tartammada Yurub
Jadwalka Horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedka 2019/2020 oo wax laga beddelay (Goormuu bilaaban doonaa?)
Ozil oo xalay dhiibay baas waalli ah oo taageerayaasha Arsenal ay ku kala qaybsameen (daawo)
Taageerayaal badan oo Chelsea ah oo ku Farxay Ganaaxa la dul dhigay kooxdooda….(SABAB?)
Manchester United iyo Sir Alex oo wada qorshe dib loogu soo celinayo Cristiano Ronaldo garoonka Old Trafford
RASMI: Isku aadka wareega 16-ka Europe League oo la soo saaray….(Chelsea iyo Arsenal oo la kala leexiyay)
RASMI: Barcelona oo dib kaga soo ceshatay kooxda Nice xidigeeda Marlon Santos
Dajiye June 14, 2018
(Barcelona) 14 Juunyo 2018. Kooxda Nice ayaa ku dhawaaqday in Barcelona ay dib kaga ceshatay xidigeeda Marlon Santos oo hal xili ciyaareed cajiib ah la qaatay, taasoo ka dhigan in xili ciyaareedka cusub uu markale dib u xiran doono maaliyada kooxda Barca.
Barcelon ayaa ugu dirtay Marlon Santos heshiis laba xili ciyaareed amaah ah kooxda reer France ee Nice, iyadoo heshiiska uu qeyb ka ahaa in sidoo kale kooxda reer France ay ku iibsan kartay aduun dhan 25 milyan euro hadii uu qanciyo adeega laacibkan.
Laakiin Barca ayaa sidoo kale xaq u leh inay dib u soo ceshato ciyaaryahanka ka dib xilli ciyaareed cajiib ah uu la qaatay kooxda reer france, laakiin maanta ayaa heshiiskaas labada dhinac ay ku heshiiyeen in la kansalo maadaama uu ahaa heshiiska laba xili ciyaareed.
Kooxda Nice ayaa war rasmi ah ay arintan kasoo saartay waxay ku shaacisay barteeda Twitter-ka “Si rasmi ah Marlon Santos ayaa dib ugu laabtay kooxdiisa Barcelona”.
Group B ee Koobka Adduunka waxaa ku badan GADUUDKA sidaa darted xulka Spain ayaa ku qasbanaan doona inuu...
Juventus oo kusii dhawaaneysa inay dhameystirto saxiixyada laba xidig muhiim ah.
RASMI: Manchester City oo heshiis cusub ee wakhti dheer ka saxiixa Aymeric Laporte https://t.co/GWMgO5blnw
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Chelsea oo ku dhiiragaliyay in qandaraaska ay u kordhiyaan Eden Hazard https://t.co/rd6UrA7OjO
RASMI: UEFA oo ganaax dul dhigtay Alexandre Lacazette… (Imisa kulan ayuu ka maqnaan doonaa kooxda Arsenal?) https://t.co/mMAdDtqyf4